सरकारले १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कति ? | Notebazar
सरकारले १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कति ?
काठमाडौं। ९फाल्गुन, २०७७, आईतवार / Feb 21, 2021 17:44:pm
नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत १० अर्ब रुपैयाँ बरावरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले पाउने प्रतिफल भने बोलकबोल विधि मार्फत निर्धारण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार बोलकबोल मार्फत आएका आवेदनका आधारमा कट आफ रेट निर्धारण गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । यसभन्दा अघि सरकारले निष्काशन गरेको १० अर्ब रुपैयाँ बरावरको ६ वर्षे विकास ऋणपत्रको कट रेट ३.९० प्रतिशत कायम भएको छ ।
मंगलबार देखि निष्काशन हुने सो विकास ऋणपत्र भने ८ बर्षमा परिपक्क हुनेछ । यसको ब्याजदर पनि यसभन्दा अघिल्लो विकास ऋणपत्रमा तय भएको कट अफ रेटको हाराहारीमा नै हुनेछ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण घट्दो क्रममा रहेको ब्याजदरका कारण विकास ऋणपत्रको कटअफ रेट पनि कम तय हुने देखिन्छ ।
गत बैंशाखमा निष्काशन भएको विकास ऋणपत्रको कट अफ रेट ६.४८ प्रतिशत कायम भएको थियो । तर, गत असोजमा निष्काशन भएको विकास ऋणपत्रको कट अफ रेट ४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी माघको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यो घट्दो क्रममा मंगलबार निष्काशन हुन लागेको विकास ऋणपत्रको कट अफ रेट पनि सोही आधारमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग मार्फत जारी हुने सो विकास ऋणपत्रको नाम ‘विकास ऋणपत्र, २०८५ घ’ रहेको छ । बोलकबोल मार्फत बिक्री हुने सो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकहरूले भाग लिन पाउने छन् ।
सो ऋणपत्र खरिदका फागुन ११ गते राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा गोप्य रुपमा बोलपत्र पेस गर्नु पर्नेछ । यसरी पेस गरिएको बोलपत्र माघ १२ निष्कासन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
धितोमा राखी कर्जा समेत लिन सकिने सो ऋणपत्र खरिदका लागि न्यूनतम ५० हजार देखि सोले निषेश भाग जाने गरी कुल निष्काशित रकमका लागी आवेदन दिन सकिनेछ । साथै राष्ट्र बैंकले सो ऋणपत्र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्ने जनाएको छ ।
ऋणपत्र खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले बोलकवोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलकबोलको रुपमा मात्र भग लिन पाउने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । केन्द्रिय बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाले अप्रतिस्पर्धी बोलवाल हुन पाउदैनन् ।
राष्ट्र बैंकले सो ऋणपत्र प्रतिस्पर्धीलाइ ८५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्व ५० करोड र अप्रतिस्पर्धीलाइ १५ प्रतिशत १ अर्ब ५० करोड गरी छुट्याएको छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछ । कुनै एक पक्षको ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा अर्को पक्षलाई बिक्री गरिनेछ । माग भन्दा धेरै आवेदन परेको खण्डमा दामासाहीको हिसाबले बाडफाँड गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धी बोलवालाले खरिद गर्न चाहेको रकम र बोलमुल्य बोलपत्र फारममा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताले अर्धबार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउने छन् ।
स्प्रेड नाघे सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुखलाई नै कारबाही हुने 1 day ago
बैंक र बीमा कम्पनीको विवाद : के हो बीमालेख धितो कर्जा ?5days ago
सूचना प्रवाहलाई कडाई गर्दै केन्द्रीय बैंक, गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत सञ्चार समन्वय महाशाखा6days ago
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्दै6days ago
बैंकहरुमा १३ अर्ब निक्षेप थपिँदा १८ अर्ब कर्जा, अनुत्पादक क्षेत्र फस्टायो 22/02/2021
राष्ट्र बैंकले ५५ करोड रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने 21/02/2021
वित्तीय प्रणालीमा एक खर्ब बढी तरलता, २० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक 18/02/2021
अधिक तरलताको समस्या अझै समाधान भएन, बिहीबार २० अर्बको रिभर्स रिपो 17/02/2021